Itoobiya Oo Looga Digay In Xukunka Deg-Degga Ah Ay Ku Hoos Qariso Xad-Gudubyo Kale | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Itoobiya Oo Looga Digay In Xukunka Deg-Degga Ah Ay Ku Hoos Qariso Xad-Gudubyo Kale
Washinton (Hubaal)-Dowladda Mareykanka ayaa uga digay xukuumadda Itoobiya inaysan Xaaladda deg-degga ah ee ay Waddankeeda kusoo rogtay ku geysan Xad-gudubyo ka dhan ah bani’aadamnimada, gaar ahaan midda shacabkeeda. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Mareykanka, ayaa sheegay inay tahay in Dowladda Addis Ababa ay caddeyso sida ay u doonayso inay ku dhawrto Xuquuqda dadka rayidka ah, muddada uu soconayo xukunkan deg-degga ah oo gaadhaysa lixda bilood.
Sidoo kale, Hoggaamiyaha Jarmalka, Angela Merkel ayaa Salaasadii laga soo gudbay ugu baaqday Xukuumadda Itoobiya in ay shacabka u ogolaato xoriyad ay ku sameeyaan dibad-baxyo nabadeed.
Xukuumadda Washington, ayaa noqonaysa dowladdii u dambeeyay ee ku biirisa codkeeda walaaca caalamku ka qabo Xukunka Deg-degga ah ee ay Dowladda Itoobiya waddankeeda kusoo rogtay.
Arrintan ayaa imanaysa kaddib markii bilooyin ay Itoobiya ka socdeen dibadbaxyo watay qalalaase oo looga Hor-jeeday Dowladda oo ay ku dhaqaaqayeen labada Qowmiyadood ee ugu ballaadhan bulshooyinka waddankaas.
Afhayeenka u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa intaa ku daray inay Xukuumadda Addis Ababa cabudhinta ay ku hayso shacabkeeda dhaliilaha u soo jeeda ay sii xumeyn karto Xaaladda haatan Waddankaas ka taagan.
Dhanka kale Qayb ahaan xukunka deg-degga ah ee ay dowladda Itoobiya saartay dalkeeda, ayaa waxaa ka mid ah in ciidammo u badan millatetri la geeyay magaalooyinka dalkaas iyo in la mamnuucay isku-soo-baxyada ay shacabku dalkaas dhigayaan.
Ugu dambeyn, Boqolaal ruux ayaa dhintay tan iyo markii ay dibad-baxyadu ka billowdeen Itoobiya bishii November ee Sannadkii hore, Dowladduna waxay qirtay in tirada dadka ku geeriyooday Dibad-baxyadu ay sii kordhi karto oo ay gaadhi karto ilaa iyo 500 oo ruux.